Khulisa ifuthe lakho kwiMithombo yeendaba kuLuntu ngesiXhobo seDatha esiSebenzayo seDatha | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 9, 2015 NgoMvulo, Februwari 9, 2015 Douglas Karr
Ehlabathini apho uninzi lwamashishini ukwanda kwi-Intanethi ubukhulu becala kuxhomekeke kwimisebenzi yenethiwekhi yokunxibelelana, ukuphuhlisa isicwangciso sokudibana kwezentlalo kunokuba ngumceli mngeni wokwenyani. Nangona kunjalo amandla amangalisayo wentengiso yemithombo yeendaba kwezentlalo igcina ukuqhuba amashishini aya kula majelo ukutsala umdla kunye nokwandisa ulwazi lwegama.
Ngokunxulumene nokwanda okukhawulezileyo kweendlela zosasazo zasekuhlaleni, a Uphononongo luka-2013 olwenziwe yi-Linkedin kunye ne-TNS ityhila ukuba i-81% yee-SMB okwangoku zisebenzisa ezi nethiwekhi ukuqhuba ukukhula kweshishini, nge-61% yazo ibona izibonelelo ezibonakalayo ngokubhekisele ekufumaneni abathengi abatsha. Nangona kunjalo, ukuphucula ukubonakala kwegama lakho phakathi kwabaphulaphuli ekujoliswe kubo, ufuna isicwangciso endaweni yokuzingela kwaye kulapho Ukungalingani itsibela ngaphakathi.
Ukujongana noDatha oluBalulekileyo kwisiCwangciso soMxholo
Ukungalingani yidatha kubahlalutyi iqonga elineenjongo zokuxhobisa ubukho beendaba zentlalo ngokunika iiseti ezifanelekileyo zedatha ngexesha lokwenyani. Ukusuka ekubekeni iliso kwizithuba eziphezulu ezenziweyo kuhlalutyo lomncintiswano, isixhobo sisebenzisa uluhlu lweemetrikhi ukuqokelela iiseti zedatha ishishini elithile elinokufumana eyona nto ibaluleke kakhulu. Ngale ndlela, ii-brand zinokulungelelanisa isicwangciso-nkqubo seendaba esixhaswe ngokwasentlalweni esima amathuba okutsala abathengi ekujoliswe kubo.
Umbono kukwandisa zonke iinkqubo eziphambili ezinxulumene nokudalwa komxholo kunye nokubekwa ukuze kuveliswe umsinga oqinisekileyo wezikhokelo ezithembekileyo. Ngokukunika izimvo zeziphi iintlobo zezithuba eziqhuba kakhulu ukuzibandakanya kunye nokubonisa iingxoxo ezifanelekileyo kuluntu ekujoliswe kulo, Ukungalingani yenza ukuba iimveliso ziqonde isimilo sababukeli kwaye zisebenzise olu lwazi ukwenza umxholo onempembelelo ngakumbi.
Isebenza njani i-Unmetric
Kuba omnye wemiceli mngeni ophambili kwimithombo yeendaba zentlalo wenza umxholo onyanzelisayo, Ukungalingani uzimisele ukuququzelela oku ngokunika inkuthazo, uhlalutyo olukhawulezayo, kunye nokufikelela kwizithuba ezithile. Icandelo loKhuthazo lithathela ingqalelo ukhetho lwangaphambili kwinkampani ethile ukubonisa imifudlana yezona ndawo zidumileyo.
Inyathelo elongezelelekileyo luhlalutyo lomncintiswano, apho iqonga likwazisa xa iposti ethile, umfanekiso okanye ividiyo iqala ukufumana inani elingaqhelekanga lokuqwalaselwa kwi-Intanethi. Oku kunika ithuba kwangoko lokuba ujoyine ingxoxo ethandwayo okanye ubukele nje indlela abathengi abaziphatha ngayo.
Ngapha koko, yenye yeendlela Ukungalingani kuthatha inqanaba elitsha ngokupheleleyo kuposti kunye nohlalutyo lokuzibandakanya ekufuneka lusebenze njengesiseko sokucwangcisa amanyathelo enkampani kwikamva. Icandelo lamaGqabantshintshi limele inkqubo echonga ngokukhawuleza izinto okanye iiprofayili ezikhawulezayo ukufumana ingqalelo ukwenza ukuba ii-brand zihlale zinxibelelana nazo zonke iingxoxo eziqhubekayo.
Ukuqokelela kunye nokuhlalutya idatha enokuthathwa inokuba yinkqubo entsonkothileyo iinkampani ezininzi ezinokubona njengenkcitha xesha. Nangona kunjalo, ngokujonga rhoqo iindlela zosasazo lwasentlalweni, iimveliso zinokuchonga ngokulula amathuba aphambili kwaye zenze inkqubo yokucwangciswa komxholo kunye nokwenza ngcono kungaphelelanga. Ngokusebenzisa ujongano olunomdla, Ukungalingani ihambisa iziqwenga zolwazi ezinokubaluleka ekusasazeni ifuthe lenkampani ethile kwezentlalo.
Ukuthathela ingqalelo ukubaluleka okukhulayo kokuyilwa kwesicwangciso-nkqubo seendaba zosasazo ukubhenela kwelona nani likhulu labasebenzisi ekujoliswe kubo, amashishini amancinci kulindeleke ukuba agxile kwezi ndlela kunakuqala. Ukungalingani ijonge ukonga abathengisi ixesha elifunekayo lokucwangcisa nokumilisela izicwangciso-qhinga zosasazo lwentlalo kunye nokwenza ukuba iinkampani ezininzi zibe ngamalungu aphakamileyo oluntu lwentlalo.
tags: Hlalutya umxholo wentlaloqhinga lomxholoyenza umxholo onyanzelisayouhlalutyo kwimidiya yoluntuimidiya yoluntu kunye nesicwangciso somxholoimpembelelo yemidiya yoluntuiqonga leendaba ezentlaloengagungqiyo